မြန်မာသမိုင်း ကုန်ဘောင်ရာဇဝင်တွင် လုပ်ရည် ကြံရည် ရှိ လျက် ကံ အကြောင်းမလှသဖြင့် မင်းအဖြစ်ကို မရသော မင်းသားများအနက် ပြည်မင်းသားနှင့်ကနောင်မင်းသားတို့မှာ သာယာဝတီမင်းမှ ဖွားတော်မူသော သားတော်များအနက် လက်ရုံး၇ည် နှင့်နှလုံးရည် ပြည့်ဝသော သားတော်များဖြစ်သည်အပြင် နန်းတွင်ပညာရှိ မှူးမတ် ပြည်သူများက ချစ်ခင်လေးစားသော မင်းသား ၂ပါးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကံအကြောင်းမလှ သဖြင့် မင်းသား ၂ ပါးစလုံးမှာ မလိုသူများကြောင့် အချိန်မတိုင်ခင် ကံတော်ကုန် ကြရသည် မှာ နှမြောစရာကောင်းသလို မြန်မာပြည်အတွက် ကံဆိုးရခြင်းဖြစ်သည်။သာယာဝတီမင်း ထီးနန်းကို ပြည်မင်းသား ဆက်ခံနိုင်ပါက ဒုတိယ အ၈ၤလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲသည် ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိ ကြော ...
ခရီးထွက်စူးစမ်းခြင်း ဟူသည်မှာ သာမန်အားဖြင့် လူသူမရောက်ပေါက်သေးသော ဒေသသစ်များကို စူစမ်းရှာဖွေ လေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စူးစမ်းရှာဖွေမှုနယ်သည် အလွန်ကျယ်ဝန်းသည်။ ဒေသတစ်ခု၌ မှီတင်းနေထိုင်သောလူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သစ်ပင်တို့နှင့်တကွ ယင်းတို့နှင့် မကင်းရာမကင်းကြောင်းဖြစ်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ကိစ္စဟူသမျှတို့သည် သူတေသီပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက် လေ့လာဖွယ်ရာချည်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် စံနစ်တကျ စူးစမ်းလေ့လာကြသည့်အခါ စူးစမ်းရေးအဖွဲ့သည် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုကို သတ်မှတ်ကာ ကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စုပေါင်း၍ ခရီးထွက်ပြီးလျှင်၊ အများမသိသေးသော ကိစ္စရပ်တို့ကို သိအောင် ရှာဖွေကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ...
နက္ခတ္တဗေဒ သည် ဂြိုဟ်များ၊ ကြယ်များ၊ ဂယ်လက်ဆီများနှင့် အာကာသအတွင်းရှိ အခြားအရာဝတ္ထုများကို လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ နက္ခတ္တဗေဒသည် ရှေးအကျဆုံးသော သိပ္ပံပညာရပ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး သမိုင်းမတင်ခင်အချိန်ကပင် စတင်ခဲ့ကြသည်။
1. ရှေးဟောင်းခေတ် နက္ခတ္တဗေဒ
2. နက္ခတ္တဗေဒ၏ သမိုင်း
၂၀ ရာစုမှစ၍ နက္ခတ္တဗေဒပညာသည် အလွန်ပင် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အခုအခါတွင် အလွန်ကြီးမားသော တယ်လီစကုပ်များဖြစ်သည့် ဟပ်ဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ် Hubble Space Telescope စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ မိုင်ပေါင်း ဘီလီယံများစွာဝေးသော ဒေသမှ ကြယ်များနှင့် ဂယ်လက်ဆီများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တို့သည် ရေဒီယိုလှိုင်းနှင့် အိတ်စ်ရေး x rays တို့ကိုသုံး၍ ဧရာမ လှိုင်းထုတ်လွှင့်စက်များဖြင့် အရာဝတ္ထုများကို ကြည့်ရှုကြသည်။
3. နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ကိရိယာများ